16'96 Concepts | Yangon Furniture — Why We Price the Way We Do
Why We Price the Way We Do
The traditional way in Bamar-pyi - done two ways:
Furniture companies act as middlemen. They outsource custom or in-house designs to mass furniture manufacturers (here or our obvious neighbor, China). Manufacturers are able to purchase large quantities of raw materials and across the board, pay workers poorly. You end up paying up for the middlemen’s margins, just because you didn’t know where to look and because these factories don’t haveafancy storefront.
မြန်မာပရိဘောဂလောကမှာ ဈေးသတ်မှတ်ရောင်းချတဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်နည်း (၂) မျိုးရှိပါတယ်။
ပထမတစ်နည်းကတော့ ပရိဘောဂများကို အလုံးရေ ရာချီထောင်ချီထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံများ (အနီးကပ်ဆုံးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတရုတ်) မှ ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူပြီး ပြန်လည်ရောင်းချတာပါ။ ဒီစက်ရုံတွေက ကုန်ကြမ်းများကို ဈေးချိုချိုနဲ့ဝယ် အလုပ်သမားများအား ထိုက်သင့်သလောက်လစာမပေးပဲ ခိုင်းစေထုတ်လုပ်တဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းကထင်သလောက် မများပါဘူး။ ၀ယ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပေးရတာက ကြားလူဖြစ်တဲ့ ပရိဘောဂရောင်းချသူများကို ပေးရတဲ့ အမြတ်ပွဲစားခပါ။ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့လဲ အဲ့လိုလုပ်တဲ့စက်ရုံတွေ ဘယ်နားရှိမှန်းမသိ ဘယ်လိုမှာရမလဲမသိတဲ့အတွက် ကြားလူတောင်းတဲ့ဈေးပေးဝယ်ရတာပါပဲ။
The other common thing we see here is furniture companies importing stuff from Malaysia or China, sometimes great stuff, sometimes not. It’s hard to tell because the majority of the products all normally look ‘the same.’ They range from things like IKEA (mid-range, furniture that isn’t made to last) to luxurious European creme de la creme goodies (bougie furniture that we can’t afford). Furniture companies who import incur high overhead costs -- things like showroom rent, office space, warehouse space, transportation. Costs you pay for above the actual product’s price.
နောက်တစ်နည်းက အခုနောက်ပိုင်း တော်တော်များများလုပ်လာကြပါတယ်။ မလေးရှား၊ တရုတ် စသည်ဖြင့် အခြားနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ပြီးပရိဘောဂများကို တင်သွင်းရောင်းချတာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ အမျိုးအစားအရည်အသွေးကောင်းပြီး တစ်ခါတစ်ရံလဲ အရည်အသွေးနိမ့်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများက အရောင် ဒီဇိုင်းတွေ ထူးမခြားနားဖြစ်နေတဲ့အတွက် သိဖို့နည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်။ ၀ယ်ပြီးအသုံးမခံမှသာ သိကြတာပါ။ အဲ့လို အဆင်သင့်တင်သွင်းရောင်းချတာမှာ IKEA လို ရေရှည်ခံဖို့အတွက်ပြုလုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ ပရိဘောဂများမှစပြီး ဈေးတွေခေါင်ခိုက်လို့ တော်ရုံလူမ၀ယ်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဥရောပနာမည်ကျော်တံဆိပ်တွေအထိ အစားစားရှိပါတယ်။ အဲ့လို ကုမ္ပဏီတွေကြတော့ ပြခန်းငှားခ၊ ဂိုဒေါင်ငှားခ၊ ရုံးခန်းငှားခ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်စတာတွေအတွက် ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကို တင်ထားတတ်ပါတယ်။
Our way, the 16’96 way, is quite simple. It’s tempting to play middlemen, but we care about our designs, quality, and new ideas -- things we can’t control with an outsourced factory, at least not in the long-run. We teach our carpenters to level-up their trade, to think creatively and critically to bring forth new designs we want to prototype. That’s why we choose to pay them well. We care about inspiration and nurturing curiosity.
Oh, another thing. Skip the showroom, and come to our vibrant workspace to touch and feel our 16’96 products. Showroom rent in Yangon is not worth our dime, neither yours--we both know it. The only overhead you pay on our products is to the livelihoods of the beautiful human beings bringing the furniture designs to life, craftsmanship, and our commitment to constant experimenting and learning.
Even after all this, our stuff is stillatiny bit more expensive than we want them to be. Trust us, we are committed to getting the right prices to you, soon to be all transparent and readily available on our website.
ဆယ့်ခြောက်ကိုးဆယ့်ခြောက်မှာကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလုပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်လေးပေါ့။ ကြားလူလုပ်ပြီး ပရိဘောဂရောင်းရတာ လွယ်ကူပေမဲ့ ဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေး၊ အကြံဥာဏ် စတာကို အလေးထားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် mass production လုပ်တဲ့စက်ရုံများမှာ ပြုလုပ်ဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ရင် ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို အရေအတွက်ရာထောင်ချီထုတ်ရမဲ့အပြင် အရည်အသွေးကိုလဲထိန်းချုပ်လို့မရ၊ သူသူငါငါရောင်းနေတာမျိုးကို ကိုယ့်တံဆိပ်တပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ဆယ့်ခြောက်ကိုးဆယ့်ခြောက်မှာက ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းရွေးတယ် ဒေသခံလက်သမားတွေနဲ့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင် ဆွေးနွေးတယ် သူတို့လုပ်နိုင်တာထက်ကိုလဲပိုပြီးကြိုးစားစမ်းသပ်ပေးဖို့ အမြဲအားပေးတိုက်တွန်းနေတယ် အဲ့ဒါကြောင့်လဲလက်သမားများကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် လစားပေးချင်တယ် ပေးလဲပေးပါတယ်။ ပရိဘောဂရောင်းတာတစ်ခုထဲတင်မဟုတ်ပဲ ကုမ္ပဏီနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေကိုပါ သိချင်စိတ်လုပ်ချင်စိတ်ကို မွေးမြူပေးတာမျိုးကိုပါ အားပေးအားမြောက်လုပ်ပေးချင်တာပါ။
နောက်တစ်ခုက ပြခန်းပါ။ ဆယ့်ခြောက်ကိုးဆယ့်ခြောက်မှာ ပြခန်းကြီးရယ်လို့သီးသန့်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ရုံးခန်းမှာ ကုမ္ပဏီက ပရိဘောဂတွေပြသထားပေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူ ၀ယ်ယူလိုသူတွေအနေနဲ့ ရုံးခန်းကိုလာလည်ပြီး ပရိဘောဂတွေကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ကြည့်လို့ရတယ်။ ရန်ကုန်အိမ်ငှားခတွေက မိုးထိမြင့်နေတာပါ။ ပြခန်းလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ ဈေးကြီးကြီးပေးနေရတာမျိုး ကျွန်မတို့လဲမလိုချင်သလို ၀ယ်ယူသူဖက်ကလဲ အဲ့အတွက်ပိုပေးချင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ ရုံးခန်းမှာပဲ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပရိဘောဂတွေကို အသုံးပြုပြင်ဆင်လိုက်တော့ တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်လဲ ကိုယ့်လုပ်တဲ့ပရိဘောဂတွေအဆင်ပြေမပြေ တစ်ခါတည်းစမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်လို့ရတယ် တာရှည်ခံမခံစောင့်ကြည့်နေလို့ရတယ်။ ၀ယ်ယူသူဖက်က ပေးရတာဆိုလို့ ဆယ့်ခြောက်ကိုးဆယ့်ခြောက်ပရိဘောဂများကို အသက်ဝင်လာအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့သူများ၊ လက်သမားများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အသစ်အသစ်သော ဒီဇိုင်းတွေလုပ်နည်းတွေကို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း အတွက်တွေပါ။
တတ်နိုင်သမျှစရိတ်တွေလျှော့ချထားတာကိုတောင် ဆယ့်ခြောက်ကိုးဆယ့်ခြောက်ရဲ့ ပရိဘောဂတွေက ဈေးမြင့်တဲ့ထဲမှာပါနေပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက်လဲ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အသက်သာဆုံး အမှန်ကန်ဆုံးဈေးနဲ့ ရောင်းချပေးနိုင်အောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ မကြာခင်မှာလဲ Transparent Pricing လို့ခေါ်တဲ့ ဆယ့်ခြောက်ကိုးဆယ့်ခြောက်ပရိဘောဂများအားလုံးရဲ့ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြနိုင်အောင်လဲ ကြိုးစားနေတဲ့အတွက် စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
Kimiko - April 22, 2019 16'96 Concepts
Curating AVA Collection
Collection StoriesKay Thi Naing May 8, 2019
Revamp : 16’96 Concepts Workspace (Burmese Version)
Revamp StoriesKay Thi Naing March 21, 2019